Disiki - Mamirioni Macheki
Ese zviratidzo, marogo, uye masheji evhatidziro anoratidzwa akanyoreswa uye / kana asina kunyoreswa Mitemo yevaridzi vadzo. Kuzvara makazara kana mune chero fomu pasina mvumo yakanyorwa kunorambidzwa. Kodzero Dzese dzakachengetedzwa.
Ruzivo rwunopihwa pane ino webhusaiti nderwe ruzivo rwekuziva chete, saka, vashandisi / vashanyi havafanirwe kuita chero sarudzo kungoenderana nazvo. Zvinokurudzirwa kwazvo kuti vese vashandisi vatsvage yakazvimirira nyanzvi kuraira vasati vaita chero sarudzo idzo dzine chekuita nemari, hunhu kana zvemutemo. Iyo Kambani haina mutoro wekusawirirana kana zvisakarurama mukati meruzivo rwapihwa. Iyo Kambani inogona kana inogona-kusave iye chaiye mupi webasa rakataurwa, nekuda kwechikonzero ichocho, Kambani inongove nebasa rekugadzirisa kuendeswa kwebasa zvinoenderana nechero hukama hwechibvumirano.
The MillionMaker.com webhusaiti inopihwa pane "AS IS" uye "AS AVAILABLE" hwaro pasina chinomiririrwa kana kutsigirwa chakaitwa uye pasina garandi yemhando ipi zvayo ingave inoratidzira kana inorehwa, kusanganisira asi isingagumiri kune zvirevo zvinoratidzirwa zvemhando inogutsa, kugwinya kwechimwe chinangwa, kusaputsa, kuenderana, chengetedzo uye kurongeka. Chero uye zvese zvinetswa zvingamuka kubva mukuwana kwako nekushandisa kwedu mawebhusaiti, kungave nekuda kwekuregeredza, kutyora basa kana zvimwewo, zvinosiiwa kusvika pakukwirira kwakabvumidzwa nemutemo.
Zviri mukati MillionMaker.com Webhusaiti ndeye yeruzivo chete uye haina chikamu chepamutemo kana imwe nyanzvi yekupa zano. Chero kupihwa hanya kwakaringana kwatorwa kuti kuve nechokwadi chekuti ruzivo rwunopihwa pane yedu mawebhusaiti rwakarurama uye rwazvino, uye hatigone kugamuchira mutoro nekuda kwemhedzisiro ipi neipi kubva nekuda kwekuvimba kana kushandisa kweruzivo rwakazara sezvakataurwa pamusoro apa. Kushandisa kwako chero kwewebsite yedu hakugadzira gweta / gurukota / mupi wezano - hukama hwevatengi MillionMaker.com, uyewo kushandisa kwakadaro hakuzi kugashira kwemutemo kana imwe nyanzvi yehunyanzvi kubva MillionMaker.com. Vese vashandisi vemawebhusaiti edu, vangave kana kwete vashandisi varipo vatengi veMillionMakers.com, vanorayirwa kuti Vataure nesu uye / kana kutora rairo dzakakodzera dzehunyanzvi vasati vazvipira kune chero chiito kana kutora chero danho maererano nemasevhisi akumbirwa.
Incorporation uye LLC Fform Services
Iyo Incorporation uye LLC Fform Services inosanganisira iko kugadzirira uye kufaira kwemagwaro ekuumba kune yako nyika, zvichibva chete pane ruzivo rwunopihwa newe mukuraira sevhisi uye ichaendeswa nenjodzi yako wega. Nekuendesa magwaro ekuumbwa kwekambani kudunhu rako, MAMIRIONI VAGadziri havaite vimbiso kana kuyedza kuona kuti ruzivo rwuri mumagwaro ekugadzira rwakarurama, rwakakodzera kana rwakazara. Ichowo basa rako kuwana nekuchengetedza mvumo usati wagadza akanyoreswa / mugari mumiririri wekambani yako. Kupfuurirazve, isu hatina mvumo yekuona kuti ese mamiriro ako ehurumende kubatanidzwa kana LLC kuumbwa zvinodiwa zvapedzwa, uye isu hatina basa rekukuyambira kana kukuyeuchidza nezve chero zvinodiwa kana zvisungo, kusanganisira, asi zvisina kuganhurirwa kune chero nyika inodiwa kana Federal mafirita, mishumo yegore, mitero inofanirwa. Uyezve, usati washandisa masevhisi edu, ibasa rako chete kusarudza Corporate Fomu rebhizimusi rako (C-Corporation, S-Corporation, LLC, Partnership, Yakavanzika kana Yakatemerwa).
Service Order Kubvisa
Kana chero odhi yemabasa edu ikadzimwa mushure mekunge tagamuchira mubhadharo, ipapo iyo izere iyo mari ichadzoserwa kunze kwekubhadhara $ 50.00 yekubhadhara. Chero chero odhita yakagadziriswa chikamu haina kudzoserwa.
MARI YEMADZIMAI HAYI ISI MITEME YEMOTO. MARI YEMADZIMA idhodhi kunyoresa uye yekutsvaga kambani chete. Irwo ruzivo rwunopihwa pane MillionMaker.com inopihwa kuitira ruzivo rwakawanda ruzivo chete. Webhusaiti, MillionMaker.com, ndeyezvose uye inoshanda neMM LLC. Sezvakataurwa pamusoro, MM LLC (kusanganisira masevhisi anopiwa kuburikidza MillionMaker.com) haisi kambani yemutemo, uye hapana chero wevashandi paMARI YEMADZIMA anoshanda segweta rako, uye hapana mumamiriro ezvinhu akafanira ruzivo rwunopihwa pane ino saiti kana chero kutaurirana nemushandi weMARI YEMUKA vanoratidzwa sezano repamutemo. Zvakare, urwu ruzivo harwuna kufanira uye harufanire kushanda seinitsiva zano repamutemo. Nekuti mutemo unogara uchichinja, ruzivo rwuri pane ino saiti harugone kuvimbiswa kuti rwakarurama, rwizere kana zvazvino. Zvinokurudzirwa kuti uone Gweta pamusoro pekutamira kwako, mabasa ezvidzidzo, kugadzirwa kwebhizinesi, zviratidzo, bhizinesi rezinesi, kubvunza nezvemari, mabasa epfuma, bhizinesi rinotengeswa, kana kana uine mibvunzo isingazungunuke pane ino saiti kana kana iwe uchida yakakwirira degree revimbiso.
Zvinogumira kuKukuvadza. Kufungidzirwa kweRisks. Disiki yeWarranties.
MARI YEMADZIMAI haatori mhosva kune chero kukuvadzwa kwakawanikwa newe, kusanganisira, asi kungogumira, kukanganisa, kusiiwa, kurasikirwa kwedatha, kunonoka kushanda kana kutumira, zvisiri kuburitswa, kudzimwa kwemafaira kana e-mail, zvikanganiso, kukanganisa, komputa mavhairasi, kana kukanganiswa kwebasa chero rupi zvarwo, kana chero kutadza kuita, kutadza kutaurirana, kuba, kuparadza kana kuwana mvumo yekuwana marekitori emamiriyoni, chirongwa, ruzivo kana masevhisi. MARI YEMADZIDZO haatore mhaka yemhando, kunyatso, kana chokwadi cheiyo data / ruzivo rwakaunganidzwa nekushandiswa chero kwese kweshumiro. Kushandiswa kweruzivo rwakaunganidzwa kuburikidza nemamirioni eMAKONESI masevhisi ari panjodzi yako. Hapana zano repamuromo kana rakanyorwa rakapihwa neMARI YEMAKARA Vashandi, vashandi varo, vamiririri, vechitatu-bato vanopa, vanopa, marezinesi kana zvimwe zvakadaro, ichagadzira waranti kana rezinesi; uye hauzove nekodzero yekuvimba neruzivo rwakadaro kana zano.
Iwe unofungidzira zvakazara mutoro uye njodzi yekushandisa kwako MARI YEMAHARA masevhisi. MARI YEMAHARA haina kuvimbisa chokwadi kana chizere cheruzivo rwuri mukati maro masevhisi. MILIYONI MAKESI masevhisi anopihwa pane "sezvazviri", uye "sezvazvinowanikwa" panheyo. Iri ibasa rako kuongorora kuenderana, kukwana uye kukosha kweruzivo rwese uye zvawatsvaga zvakawanikwa pawebsite yedu kana kutaurwa pachena nevashandi veMARIion MAKESI.
Hapana anomiririra kana waranti, inoratidza kana kutaurwa, inopiwa maererano nemutemo kana chero mhedzisiro inokonzerwa nekushandiswa kwemasevhisi edu. Chikwereti cheMARI YEMADZIMAI kubva pamubhadharo unokonzerwa nekushandiswa kwemasevhisi edu unongogumirwa kune iyo mari chaiyo inobhadharwa kuMARI YEMADZIMONI kuti ishandiswe. Zvese zvataurwa pamutemo zvinobva mukushandiswa kwemasevhisi edu zvichanyudzwa mumatare eBelize
Muchiitiko icho chero chipi zvacho chakanangana neichi chinoburitswa ichi chakaitwa kuti chisingazungunutswe, zviwanikwa zvakadaro zvichamiswa kana kubviswa zvakaringana zvinodiwa kuitira kuti Chibvumirano ichi chirambe chiripo mukushanda kwakazara uye kuchishanda.